माधव नेपालले राजिनामा मागेपछि ओली बैठकमा आएनन, प्रचण्ड एक्लै…हेर्नुहोस् !
काठमाडौ : नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सञ्चालनको जिम्मा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई दिएर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारमै अन्य काममा व्यस्त भएका छन् ।
बैठकको दोस्रो दिन आजबाट नेताहरुले बैठकका एजेण्डामा केन्द्रित रहेर धारणा राख्ने क्रम शुरु भएको छ । सरकार र पार्टी कामको समीक्षासहित अधिकांश एजेण्डा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्धित छन् । तर ओली भने सदस्यहरुका धारणा सुन्ने बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन् ।
बैठकको पहिलो दिननै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना धारणा राखेर सदस्यहरुलाई कार्यसूचीमा केन्द्रित भई कुरा राख्न भनिसकेको र उनीहरुले राखेका धारणा प्रधानमन्त्रीसम्म आइपुग्ने भएकाले अन्य काममा व्यस्त भएको ओली निकट स्रोतले जनाएको छ । बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बसिरहेको छ ।
दुई अध्यक्षबीचको सल्लाह अनुसारनै बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने र महासचिव पौडेलले बैठक सञ्चालन गर्ने तय भएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली यसअघि पुसमा बसेको धुम्बाराहीको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि अनुपस्थित भएका थिए ।
बैठकमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले ओलीको राजिनामा माग्ने तयारी गरिरहेका छन् । आफ्नो चर्को आलोचना हुने बैठकमा नबस्ने सोच अनुसारनै प्रधामनन्त्री निवासमै बसिरहेको बैठक पनि ओलीले छल्न खोजेको आरोप अर्को पक्षले लगाएको छ ।
Previous परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो- चीनबाट हाम्रो सीमाना मिचिएको छैन…हेर्नुहोस!
Next नेकपा स्थायी कमिटी बैठक : अतिक्रमित भूमि गुम्न नदिन सदस्यहरुको माग, वार्तामा भारतले चासो नदिएको परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ…हेर्नुहोस!
समस्या बोकेर अब न्युज24 जानु परेन, रवि लामिछानेको टीम तपाईंको घरमै आउँदै…हेर्नुहोस।
18 hours ago Daily News Nepal
देशद्रो,ही सरिता गिरि लाई पद बाट निलम्बित सम्पुर्ण राष्ट्र प्रेमी अभियान्तालाई धन्यवाद : जनमुक्ती सेना नेपाल ।
दःखद खबर,,,बाथरुम जाने क्र`ममा बे`होस भएर कुलमानका बुवाको मृ`त्यु
What The Flop का’र्यक्रम ब’न्द गर्न र सन्दिप क्षेत्रीलाई का’रबाहीको माग गर्दै उ’जुरी दर्ता,,,हेर्नुहोस्।
7 hours ago Daily News Nepal
सरिता गिरी पार्टीबाट निष्कासित, सांसद पद पनि हिड्यो…